UDonald Trump – unguMengameli obheda kakhulu emlandweni waseMelika | Scrolla Izindaba
UDonald Trump – unguMengameli obheda kakhulu emlandweni waseMelika
Ukwehluleka kukaMengameli uDonald Trump abhekane nakho ngonyaka wakhe wokugcina ehhovisi, okukhulu kakhulu kube ukuphatha kwakhe ubhubhane lwe-coronavirus.
Umengameli uwudelele ngokuphelele umsebenzi wakhe wokuvimbela ukusabalala kwe-coronavirus eMelika. Njengamanje, izwe liqophe izibalo zabantu abayizigidi eziyi-18 abane-Covid-19, izigidi eziyisishiyagalombili ngaphezulu kunalezi ezilandelayo eNdiya.
Ihamba phambili ngabantu asebeshonile abangaphezu kwama-323,000. I-Brazil ingeyesibili ngokushona kwabantu abangaphezu kwama-186,000.
UTrump uvele wama wabukela ngesikathi abaholi abanjengoJacinda Ardern wase-New Zealand noDkt John Nkengasong, umqondisi we-Africa Centers for Disease Control and Prevention, besebenza ngempumelelo nangokuzikhandla ukunciphisa ukwanda kwegciwane.
Isikhathi eside ubelokhu ebukela phansi ubucayi begciwane, futhi egcona esidlangalaleni ukusetshenziswa kwezifonyo nalabo abazigqokayo.
Ekuqaleni kukaMfumfu, umengameli walithola leli gciwane emahoreni ambalwa nje ngemuva kokugcizelela ukuthi “ukuphela kwalo bhubhane sekuseduze.”
Ngesikathi izinkulungwane zabantu baseMelika ziqhubeka nokushona futhi zitheleleka ngegciwane le-Covid-19, uTrump uqondisa imizamo yakhe emacaleni angenasisekelo okuphikisana nomphumela wokhetho lwaseMelika, ahlulwa kulo.
Ngesikhathi uTrump elungiselela ukuphuma e-White House, uyigobolondo lomuntu ongene kuyo. Akasenawo amandla ngezinhlelo “zokwakha udonga” noma “ukukhipha ixhaphozi”, kunalokho kubikwa ukuthi ingqondo yakhe iphendukela ethembeni lesikhathi sejele.
Uma uTrump eshiya isikhundla sobumengameli mhla zingama-20 kuNhlolanja, uzoba sengozini yokuphenywa ngabantu abaningi okubandakanya ukwenza kwakhe ibhizinisi kanye nezintela zakhe. Uzophinde aphenywe ngokukhwabanisa komshwalense, ukweqa intela, ukweba, kanye nohlelo lokukhwabanisa.